Ogaden News Agency (ONA) – Al-Jazeera : Camiilka u Shaqeeya Cadawga Umadiisa Wuxuu La Mid Yahay Warqadda Wasakhda La’isaga Tiro (Tissue paper)
Al-Jazeera : Camiilka u Shaqeeya Cadawga Umadiisa Wuxuu La Mid Yahay Warqadda Wasakhda La’isaga Tiro (Tissue paper)
Filimada wathaa’iqi (Documentary) ah ee lagu magacaabo –Sanduuqul Aswad- ee Jazeera laga daawado ayaa laga sii daayay Filim loogu magacdaray – Jawaasiista Gumaysiga – Dambigooda iyo Ciqaabta la Mariyo – (“عملاء الاحتلال.. الجريمة والعقاب” ) Filimkaa ayaa waxaa ka dhashay dood badan ka dib markii laga daawaday sida ay Israa’iil u kasabto oy u ogolaadaan inay umadooda khiyaamaan jawaasiista u shaqeeya. Waxaa filimka lagu wareysanayaa madax sare oo ka tirsanaan jiray haya’adda Shabak oo ah qaybta sirdoonka Yahuuda u qaabilsan arimaha gudaha. Waxay ka sheekeynayaan siday u soo xirahaliyaan jawaasiista iyagoo ka faa’idaysanaya duruuftooda ka dibna ay u tuuraan marka ay ka dhamaystaan waxay ka doonayeen, kolkaasuu lagu xukumo dil. Qaarka ay siiyaan dhalashada ee dhex taga Falastiiniyiinka loo geeyo carabtii ku hadhay Falastiin oo loo yaqaano Falastiinta 1948 ayaa iyaguna diida inay u yimaadaan oy la nolaadaan jawaasisiista oo guba guryaha la dajiyo sidaad ka daawan doontaan filimka.
Arimaha sida fiican u dhaqaajiyay Filika waxaa ka mid ah wareysi markii ugu horeysay laga soo duubay ninka loo yaqaano CabdiXamid Rajuub oo ah jaajuus ugu weynaa ee u shaqaynayay Yuhuuda. Ninkan oo ka tirsanaan jiray ururka weyn ee Fatax ayaa makii la ogaaday oo lagu xukumay in la dilo u cararay Isra’iil halkaasoo uu ka sii waday hawshiisii khatarta ahayd isagoo cadawga ku dhliayay in la abuuro waxay u bixiyeen Qolkii Shimbiraha (غرف العصافير ) oo ah in Falastiiniyiinta lasoo xidho xabsiga loogu geeyo ka dibna uu isaga dhigo inuu yahay masuul weyn oo ka tirsanaa Fatax oo lasoo xidhay. Muddo markuu la sheekeysto oo xagta uu hayo uu siiyo maxbuuska isagoo iska dhigaya inuu ahaa masuulkaa la soo xidhay oy is-aaminaan ayuu bilaabi maxbuuskii inuu uga sheekeeyo wuxuu qaban jiray iyo xubnaha qarsoonee uu ku xidhnaa iyo wixii kalee laga doonayo in laga ogaado. Wuxuu ahaa barnaamijkaa غرف العصافير mid aad u dhaawacay xubnihii gudaha uga shaqaynayay muqaawamada ilaa ay ka ogaadaan.
Filimkan ayaa waxaa kaloo lagaga hadlayaa meesha uu ku dambeeyo camiilka (Jaajuska) oo kuwii soo dirsaday markii hore qudhooda ay iska eryayaan marka ay ka dhamaystaan hawshuu u hayay, waana marka uu ku tilmaamayo inuu la mid yahay Warqadda Wasakhda La’isaga Tiro.
Waa filim aad u xiisa badan ee Daawasho Wacan: